क्याप्टेन विजय लामालाई पितृ शोक, दु:खी हुँदै यसो भने « Canada Nepal
क्याप्टेन विजय लामालाई पितृ शोक, दु:खी हुँदै यसो भने
काठमाडौँ। नेपाल वायुसेवा निगमका वरिष्ठ पाइलट तथा कलाकार विजय लामालाई पितृ शोक परेको छ । उनका पिताको आइतबार मनमोहन कार्डिओ थोरासिक अस्पताल, महाराजगन्जमा उपचारको क्रममा निधन भएको हो ।
पिताको निधन भएको बारे विजयले सामाजिक सञ्जालमा जानकारी गराएका छन् । पिताको निधनले दु:खी हुँदै विजयले लामा स्टाटस पनि लेखेका छन् । उनले सोमबार बालुवाटार आफ्नै निवासमा पिताको अन्तिम बिदाइ गर्न लागिएको पनि बताएका छन् ।
उनले लेखेका छन् – My buddy…my mentor, my friend and an inspiration for Honest Living…my awesome BAU left us @13:15 (1:15pm) for heavenly abode!! अत्यन्तै दु:खका साथ मेरो प्यारो बाउले सधैको लागि हामी सबैलाई छोडेर जानू भएको अवगत गराउन चाहन्छु यो स्टेटस मार्फत।
मेरो जन्म दिने आमा बाबुको अन्तिम घडीमा म उहाहरु संगै भएकोमा आफुलाई भाग्यसाली ठान्दछु l तर के गर्नु आखिर मन त होनि! भक्कानिएर रुनु मात्र खोज्छ जति रोक्न कोसिस गरे पनि! उहाँ भेट्नुहुने सबैका लागि मित्र हुनुहुन्थ्यो र उहाँलाई चिन्ने सबैको लागि शक्तिको स्रोत हुनुहुन्थ्यो।
हामी भोलि बुद्ध जयन्तिको दिन (11 a.m till2p.m) मा बालुवाटार आफ्नै निवासमा उहाको अन्तिम बिधाई गर्न गईरहेका छौ !बुद्ध धर्मको नियम अनुसार हामी उहाको पार्थिब सरीरलाई भोलि २ बजे स्वोयम्बुनाथ घाटमा दाहसंस्कार गर्नका लागि लग्नेछौ l कृपया अन्तिम श्रद्धान्जली दिन चाहने हरु बालुवाटार निवासमा आउन सक्नु हुनेछ l “बाउ तिमि बिना मलाई बस्ने बानि छैन , तिम्रो यादले निक्कै सताउने छ , तर मलाई विश्वास छ तिमि जहाँ छौ खुसि छौ, तिम्रो खुसि नै मेरो खुसि हुनेछ l”अब म तिमिलाइ कल्पनामा मात्र जिस्काउछु है? सायद झस्किन्छु होला तिमिलाइ नपाउदा! ए बाउ किन??? आखिर हार भयो नि मेरो???
प्रकाशित मिति : जेठ १, २०७९ आइतबार ९ : ४७ बजे